Waaheen Media Group » Sir Culus: Siilaanyo oo siiyey Saylici oo Hal Milyan oo Dollar oo Lacagta Imaaaraat-ka laga soo qaaday
Browse:Home Videos Sir Culus: Siilaanyo oo siiyey Saylici oo Hal Milyan oo Dollar oo Lacagta Imaaaraat-ka laga soo qaaday	Sir Culus: Siilaanyo oo siiyey Saylici oo Hal Milyan oo Dollar oo Lacagta Imaaaraat-ka laga soo qaaday
Comments Off on Sir Culus: Siilaanyo oo siiyey Saylici oo Hal Milyan oo Dollar oo Lacagta Imaaaraat-ka laga soo qaaday	Hargeysa(Waaheen) Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa Hal Milyan oo Doolar ku-xigeenkiisa u siiyey kadib markii khilaaf xoogan oo Garnaqsi ahi ku dhex maray labadooda iyo kooxda ka talisa Qasriga, kuwaas oo ku taliyey in Saylici lagu aamuusiiyo lacag qadarkeedu dhan yahay Hal Milayn oo Doolar.
Khilaafka ka dhex dhashay Saylici iyo Siilaanyo ayaa ka dhashay kadib markii Wakiilka Somaliland ee Imaaraat-ku wasiirka Duulista Hawada soo amray in uu wefti wasiiro ah usoo kaxeeyo Dubai, taasoo ku beegnayd markii madaxweyne Siilaanyo u safray Dalka Ingiriiska.
Wasiirka Duulista Hawada ayaa Madaxweyne ku-xigeenka soo gaadhsiiyey Farriintaas oo ana ku socon, balse Saylici si weyn uga xanaaqay sababta Baashe Wasiirka u amrayo isagoo dalka isagu ka sii talinaya, waxaanay dhacdadani keentay Saylici iyo Muse Biixi inay si weyn uga cadhoodaan.
C/raxmaan saylici ayaa hor istaagay weftigii u ambabixi lahaa Imaaraat-ka isagoo amar ku bixiyey illaa Siilaanyo imanayo in aanay bixi Karin, waxaana talaabadan kula calool adaygay Muuse Biixi oo la wariyey in uu Telefoon kula xidhiidhay Marwada si ay ugu war-galiso Madaxweynaha cabashada labada Musharax, kuwaas oo ku tiraabay go’aamada lagu shaqaynayaa inaanay ahayn kuwo anfacaya.
Ilo wareed u dhuun daloola khilaafkan ayaa sheegay in saylici iyo sideed xubnood oo ah mus-danbeedka madaxtooyaddu kulan fooda isku dareen kadib markii Siilaanyo dalka ku soo laabtay, waxaanu Saylici ku dooday in gobolkiisii aanu u tagi Karin mashaariicda dalka ka socda oo aan waxba laga siinin, isla markaana dhagaxaantii la dhigay aanay cidii dib ugu noqon, halka barriga Somaliland goobihii la dhagax dhigay intoodii badnayd la dhisay.
Sidoo kale, Saylici waxa uu ku tiraabay Beeshiisu in aanay saami ka helin khayraadka iyo fursadaha kale ee mashaariicda Berbera Xukuumaddu ku Iibinayso, waxaanu dalbaday xubnaha maamuli doona Dekedda ee ay Somaliland leedahay in mid laga siiyo si uu beeshiisa olole ugaga dhex raadsado.
Arrimahan ayaa la sheegay in markii hore ay ka diideen, hase yeeshee Madaxweyne ku-xigeenku ka cadhooday, taasoo keentay in lagu aamuusiiyo hal milayn oo Doolar oo uu gobolka wax kaga qabto, iyo waliba in uu hogaamiyo weftiga Imaaraat-ka, kuwaas oo wax ka bedel lagu sameeyey habeenkaas xubnihii markii hore u qorshaysnaa inay u baxaan.
Xubnaha lagu daray weftiga waxa ka mid ah Cali Xaamud Jibriil oo ka mid ah gacan yarayaasha Saylici, halka wasiiru-dawlaha Arrimaha Dibeda laga saaray, isla markaana lagu bedelay Sacad Cali Shire oo markii hore aan ku jirin.
Warar faahfaahsan oo ku saabsan Loolan adag oo ka dhex socda Madaxtooyadda oo u dhaxeeya Wasiiradda ugu Tunka weyn Madaxtooyadda, Muuse Biixi iyo Beesha Barriga Burco iyo weftiga Imaaaraad-ka ku maqan-ba kala soco Waaheen.